आज नागपंचमी पर्व मनाइदैं ! याे तरिकाले गर्नुहोस पुजा, मिल्नेछ यस्तो लाभ !
Homeरोचक / विचित्रआज नागपंचमी पर्व मनाइदैं ! याे तरिकाले गर्नुहोस पुजा, मिल्नेछ यस्तो लाभ !
August 4, 2019 Spnews रोचक / विचित्र, समाचार Comments Off on आज नागपंचमी पर्व मनाइदैं ! याे तरिकाले गर्नुहोस पुजा, मिल्नेछ यस्तो लाभ !
यसपटकको नागपंचमी सोमबार मनाइदैंछ । यस दिनलाई हिन्दु धर्म मान्नेहरुले विशेष महत्वको साथ लिने गर्दछन । यस दिन नाग देवताको पुजा गर्नाले सबै खालका दुःख र रोग ब्यथाहरु नष्ट भएर जान्छन भन्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ ।
नागपंचमी आफैंमा एक महत्वपुर्ण पर्व हो यसको उपासना र पुजाले मानिसले शान्ति समृद्धिजस्ता कुराहरु सहजै प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास रही आएको छ । ४ अगस्ट अर्थात सोमबार हस्त नक्षत्र साध्य योग एवम कन्या राशिमा चन्द्रमा रहने भएको छ । सूर्य, राहु, बुधको कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ । यस दिन विशेष विधिको उपासना गरेर तपाईं सर्प दोषबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ।
सबैभन्दा पहिले नाग पंचीको दिन,सर्पलाई तपाईले देवता को रूपमा पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ । यस दिन गरिने पुजा एक विशेष प्रकारको हुन्छ । पुजा गर्नुभन्दा पहिले बिहानै उठेर नुहाँउनुपर्छ अनी सुन,चाँदी अथवा तामाको नाग र नागिनको मुर्ति बनाउँनुपर्छ ।
मुर्ति बनाए पछि धुप,दिप नैवेद्य आदि बाट पंचोपचार वा पोडनशोपचारको उपासना गर्नुहोस् । यसरी पुजा गरिसके पछि सर्पको रुप धारण गरेका नाग नागिनलाई दूधले अभिषेक गर्नुपर्छ । अन्त्यमा पुजा गरे पछि नाग नागिनलाई कुनै पनि शिवलिगंमा चढाउनुपर्छ ।
यदि तपाई शिवपलर्गमा चढाउन सक्नुहुनन भने धातुबाट बनेको नाग नागिनलाई कुनै नदीमा लिएर बगाउन पनि सक्नहुन्छ ।
यो पनि पढ्नुस – तपाईंले बिरेनुनका बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला । यो नुन विभिन्न खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधिहरुमा प्रयोग हुन्छ । सेतो नुनको सट्टा थोरै मात्रामा बिरेनुनको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा पुग्छ ।
बिरेनुन प्राकृतिक नुन हो । यो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डाँडापहराबाट निकालिन्छ । बिरेनुनको नियमित सेवनले बाथ, पित्त र कफलाईसमेत नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । बिरेनुनको प्रयोग विषेशगरि पेटसम्बन्धी रोगमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने गरेको भएपनि यसले उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि बिरे नुनले निकै फाइदा पुग्छ । यो नुनमा सोडियमको मात्रा कम हुने भएकाले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई फाइदा पुग्छ ।
भोलि नागपंचमी पर्व मनाइदैं ! याे तरिकाले गर्नुहोस पुजा
मिल्नेछ यस्तो लाभ !
पशुपतिमा घट्यो यस्तो घ*टना: एक जना प%क्राउ, नगरपालिकालाई गरे यस्तो आग्रह (हेर्नुस भिडियो)
लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा सिडिओ नै ‘फेल’ !